Semalt Inotsanangura Nzira Yokurapa Dhidhiyo Kushandisa Lxml Nekukumbira
Kana zvasvika pakushambadzira kwehuwandu, kukosha kwekutsvaga webhu hakugoni kuve kunyangarika. Iyo inozivikanwawo se web web extra extraction, web scraping inyanzvi yekutsvaga injini yekushandiswa inoshandiswa neva bloggers uye vadzidzisi vekutsvaga kuti vabvise data kubva kune e-commerce website. Nzvimbo yekutsvaga webhusaiti inobvumira vatengesi kuwana nekuchengetedza dhiyabhorosi muzvinhu zvinobatsira uye zvakasununguka mafomu.
Mazhinji e e-commerce webusaiti anowanzonyorwa mumagadziri e HTML apo peji rimwe nerimwe rine chinyorwa chekuchengetedzwa. Kutsvaga masayiti achipa data yavo muJSON uye maSVV maitiro zvakanyanya zvakaoma uye zvakaoma. Iyi ndiyo nzvimbo yekusvitsa kwedhizha yewebhu inouya. A web page scraper inobatsira vatengesi kuti vabudise mashoko kubva kune dzakawanda kana kusina mhepo uye vanozvichengeta mumashandisirwo akashandisa user.
Basa re lxml uye Rokukumbira mukutora data
Mushandirapamwe wekutengesa, lxml inowanzoshandiswa nevablogiki uye vanoita webhusaiti kuti vabudise dhizha nokukurumidza kubva kumawebhusayithi akasiyana-siyana . Muzviitiko zvakawanda, lxml zvinyorwa zvinyorwa zvakanyorwa mumutauro weHTML uye XML. Vashandi vewebhu vanoshandisa zvikumbiro kuti vawedzere kuverenga kwe data yakabudiswa newebhu web scraper. Zvinokurudzirawo zvinowedzera huwandu hwekushandiswa hunoshandiswa nemunhu anotsvaga kuti abvise deta kubva kune imwe chete kana yakawanda.
Nzira yekubudisa sei dhidhiyo uchishandisa lxml uye zvikumbiro?
Sewe webmaster, unogona nyore kuisa lxml uye kukumbira uchishandisa nzira yekuisa pipi..Shandisai nyore nyore deta iripo kuti uwane mapeji ewebhu. Mushure mokuwana mapeji ewebhu, shandisa peji web scraper kuti ibvise demo uchishandisa HTML module uye uchengete mafaira mumuti, unozivikanwa seHtml.fromstring. Html.fromstring inotarisira webmasters nevatengi kuti vashandise mabheti semupepeti saka zvinokurudzirwa kushandisa peji peji.content pane peji.text
Chimiro chakanakisisa chemuti chinonyanya kukosha pakutsvaga data nenzira ye HTML module . CSSSelect uye XPath nzira dzinowanzoshandiswa kuwana ruzivo rwakatorwa newebhu web scraper. Kunyanya, webmasters nemablogiki vanoomerera pakushandisa XPath kuwana ruzivo pamusoro pefaira dzakarongeka zvakadai semagwaro e HTML ne XML.
Zvimwe zvinotsigirwa zvekutsvaga ruzivo uchishandisa mutauro weHTML zvinosanganisira Chrome Inspector uye Firebug. Kana ma webmasters vachishandisa Chinyorwa cheK Chrome, chengetedza kurudyi pane zvinyorwa kuti zvinyorwa, sarudza pa 'Ongorora chinhu' sarudzo, 'shandisa script ye element, tsanangurira zvinyorwa zvacho zvakare, uye sarudza pa' Copy XPath. '
Kuisa dhidhiyo uchishandisa python
XPath chinhu chinonyanya kushandiswa pa e-commerce webusaiti kuongorora tsanangudzo yemagetsi nematengo emitengo. Dhiyabhorosi yakabudiswa kubva pawebsite uchishandisa peji rewebhu scraper inogona kududzirwa nyore nyore uchishandisa Python uye yakachengetwa muzvikwata zvinoverengeka zvevanhu. Iwe unogonawo kuchengetedza data mumashizha kana mafaira eRejista uye ugogovana nayo nemunharaunda uye vamwe webmasters.
Mukushambadzira kwemazuva ano, hutano hwehupenyu hwako hunokosha zvakanyanya. Pikoni inopa vatengesi mukana wokutumira dhidhi muzvimiro zvinogona kuverengwa. Kuti utange nehuwandu hwekujekesa kweprojekiti, unoda kusarudza kuti ndeipi nzira yekushandisa. Yakabudiswa data inouya nenzira dzakasiyana-siyana kubva ku XML kusvika kuHTML. Kurumidza kuwanazve dhidhii uchishandisa peji yewebhu scraper uye kukumbira uchishandisa mazano anotsanangurwa pamusoro apa Source .